Afrika Mainty · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Marsa, 2012
Senegal 30 Marsa 2012
Eoropa Andrefana 30 Marsa 2012
Malawi 29 Marsa 2012
Mali 22 Marsa 2012
Zambia 19 Marsa 2012
Ny antoko politika mpanohitra lehibe indrindra ao Zambia, ny Movement for Multi-Party Democracy (MMD) izay nesorin'ny antoko Patriotic Front (PF) tsy ho eo amin'ny fitondrana taorian'ny fifidianana tamin'ny Septambra 2011 rehefa teo amin'ny fitondrana nandritra ny 20 taona, dia nofoanan'ny manampahefana tamin'ny 14 Martsa noho ny filazana fa tsy nahaloa ny vola fandrotsaka voafaritry ny lalàna ho an'ny fe-potoana naha-teo amin'ny governemanta azy. Maneho hevitra ety anaty aterineto mikasika ity fivoaran-draharaha ity ny Zambiana.
Afrika Atsimo 18 Marsa 2012
R.D. Kongo 18 Marsa 2012
Ny 14 Martsa 2012 ny Fitsaràna Iraisampirenena Momba ny Heloka Bevava dia nahatratra an'i Thomas Lubanga, mpitarika mpihoko fahiny tao atsinanan'i Congo, voaheloka ho nampiasa ankizy tamin'ny ady mitam-piadiana. Nolazain'ny mpitsara fa ny fanadihadiana natao tamin'ny alalan'ny lahatsary an'ireo ankizy miaramila fahiny dia tonga ampaham-porofo nanampy tamin'ny fandresena lahatra ny fitsaràna.
Namono tena i Alem Dechasa, ilay vehivavy hita tanaty lahatsary nalaina tamin'ny finday niparitaka tety anaty aterineto, nodarohana sy notaritarihana amin-kery hiditra anaty fiara iray teo anatrehan'ireo mpitazam-potsiny teo ivelan'ny Kaonsily Etiopiana ao Beirut, Libanona.. Niteraka hatezerana mafy teo amin'ireo Etiopiana mpiondana aterineto ilay lahatsary. Taorian'ny nahafatesany, ireo mpiondana aterineto dia nikarakara antso iray tety anaty aterineto mba hisian'ny rariny sy hisarihana ny saina amin'ny zava-manjo ireo vahivavy Etiopiana mpanampy an-trano iharan'ny fanaovana tsinontsinona any Afovoany Atsinanana..